eNasha.com - गेरको चुम्बन र अतिवादी मिडिया
गेरको चुम्बन र अतिवादी मिडिया
हलिउडका रोमान्टिक नायक रिचर्ड गेरले बलिउडी नायिका शिल्पा सेट्टीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा हलिउडी शैलीमा चुम्बन गर्दा तिखो आलोचना झेल्नु परेको छ ।
रिचर्ड गेरलाई शिल्पाले एड्स विरुद्धको अभियान कार्यक्रममा मञ्चमा आफैँले डोर्‍याउँदै लगिन् । मञ्चमा गेरले भारतीय एड्स पीडितहरुका लागि गरेको प्रयासका शिल्पाले बारेमा बताइन् । उनको योगदानबाट प्रभावित दर्शकहरुले गेरको कदमलाई स्वागत गर्दै ताली बजाए । यता गेर आत्मप्रशंसामा मुग्ध हुँदै शुरुमा शिल्पाको हात समाए । हातमा चुम्बन गरे, त्यसपछि क्रमशः पाखुरा हुँदै उनले अँगालो मारे । दुवै गालामा हलुका चुम्बन गरे । त्यसपछि पुनः अँगालो मारेर छिर्की लगाउँदै 'स्याल वी डान्स' सिनेमाको दृष्य झैँ झुकेर शिल्पा दायाँ गालामा तीन चार पटक हलुका चुम्बन गरे । त्यसपछि ? त्यसपछि शिल्पालाई उठाउँदै उनी अलि पर सरे र शिल्पातिर झुक्दै पञ्जाबी शैलीमा तीन पटक सलाम गरे ।
जब रिचर्ड गेरले शिल्पामाथि चुम्बनको वर्षा गरे, शुरुमा त शिल्पालाई रमाइलो नै लाग्यो । हलिउडका सुपरस्टारले आफूलाई यति विधि सम्मान दिएकोमा रोमाञ्चित अनुभव पनि गरिन् । तर जब अँगालो मारेर उनलाई छिर्की लगाए गेरले, तब उनको अनुहारमा केही विस्मय देखियो । त्यत्रो भीडमा उनले विरोध पनि गर्न सकिनन् र त्यो केही सेकेण्डलाई हाँसोले जित्न कोसिस गरिन् । तर जब रिचर्ड केही पर गएर उनलाई पञ्जाबी शैलीमा झुकेर तीन पटक सलाम गरे, शिल्पाभित्रको अँध्यारो कुनो पनि उजालियो ।
यो घटनापछि त भारतीय सञ्चार माध्यमलाई के चाहियो ? केही व्यक्तिहरुले रिचर्ड गेरको पुत्ला जलाए । गेरको कृत्यमाथि प्रश्न चिहृन उठाए । घोर विरोधका कार्यक्रम आयोजन गरिए । अझ केही व्यक्तिले त एक कदम अगाडि बढेर शिल्पा सेट्टीको पुतला समेत जलाइदिए ।
घटना यत्तिमै सेलाइसकेको छैन । शिल्पाले पत्रकारहरुलाई यो घटनालाई नतन्क्याउन अनुरोध गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्- "एउटा अतिथिलाई हामीले निर्लज्ज तरिकाले विरोध गर्नु हुँदैन ।"
न्यू मु्म्बईस्थित उनको नयाँ चलचित्र 'मेट्रो' चलचित्रको सुटिङसमेत केही हुल्याहाले विथोलिदिएका थिए । तर गेरले आफ्नो 'वस्त्रहरण' नगरेकाले वितण्डा नमच्चाउन अनुरोध गरेकी थिइन् । नौ वर्षदेखि गेरले भारतीय एचआईभी संक्रमितहरुका लागि गरेको योगदान नबिर्सन उनको अनुरोध थियो ।
बौद्ध दर्शनबाट निकै प्रभावित नायक रिचर्ड गेरको बचाउ गर्दै भारतीय बौद्ध गुरुहरुले उनको यो क्रियाकलापलाई उति आपत्तिजनक मानेका छैनन् । "अमेरिकामा यो काम आपत्तिजनक हुँदैन र यहाँ पनि उनले उस्तो अश्लीलता प्रकट पनि गरेका छैनन् । फिल्मी शैली त छ, तर यत्तिकैमा उत्तेजित हुनु आवश्यक छैन", भारतको धर्मशालास्थित एक बौद्ध भिक्षुको भनाई थियो ।
प्रदर्शकहरुमध्ये केहीले शिल्पालाई उक्त क्रियाकलापमा धम्कीपूर्ण तरिकाले माफी माग्नसमेत भनेका थिए । तर गेरले आफूमाथि कुनै अत्याचार नगरेको र घटना पछि पनि तीन पटक गेरले फोनमार्फत् आफूसँग क्षमायाचना गरेकाले प्रदर्शकहरुसँग माफी नमाग्ने दृढता व्यक्त गर्दै आइरहेकी छिन् ।
सबैभन्दा तेज र उत्कृष्ट समाचार पस्किने केही टेलिभिजन च्यानलले त चुम्बनको प्रकार, त्यसको भारतीय युवामा पर्ने असर र यो जत्तिको अश्लील क्रियाकलाप कुनै हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । बरु शिल्पाले बौद्धिकता देखाउँदै तिनलाई बुद्धि दिएकी छिन्- "यत्तिकै मिहिनेत तपाइँहरुले एचआईभी रोक्नलाई प्रयोग गर्नु भए साह्रै असल हुने थियो ।"
घटना बढ्दै गर्दा रिचर्ड गेर चाहिँ सोमबार राति नै नेपाल आइपुगेका छन् । उनी बुधबारसम्म नेपालका विभिन्न रमणीय स्थलहरुको अवलोकन गर्दै पुनः हलिउड फर्कने छन् । तर भारतमा विरोध मत्थर हुने हो कि केही व्यक्तिहरु अझै चुरिफुरि देखाइरहने हुन्, त्यो चाहिँ टीभी च्यानलमा हेर्नै पर्ने हुन्छ ।
हलिउड बलिउड परिस्थिति माया सुन्दरी गुगल भव्यता सेलेब्रिटी विज्ञापन मूर्ख्याइँ इन्टरनेट मुद्दा मामिला नग्नता श्रीमानश्रीमती फट्याइँ प्रविधि उदेकलाग्दो उदारता कीर्तिमान उपाय